Ama-Cloudwords: Ukumaketha Komhlaba Wonke Ukukhiqiza Ukufuna Nokukhula KweDrayivu | Martech Zone
ULwesihlanu, May 20, 2016 ULwesine, April 1, 2021 Douglas Karr
Ukuze izinkampani zenze khiqiza ukufunwa futhi ukhule emhlabeni jikelele, badinga ukukhuluma izilimi eziyi-12 ukuxhumana nabantu abangu-80% ababhekiswe kubo. Njengoba imali engenayo engaphezu kuka-50% yezinkampani zase-US ivela kumakhasimende womhlaba jikelele, okuqukethwe okungama- $ 39 + billion #localization kanye ne- #translation industry kuyingxenye yokushayela ukuzibandakanya kwamakhasimende ezimakethe zomhlaba wonke. Kodwa-ke, izinkampani ezidinga ukuhumusha ngokushesha izinto zazo zokumaketha futhi zande emazweni omhlaba zibhekene nenselelo enkulu: inqubo yazo ekhona yasendaweni ibhukwana, idla isikhathi, ayisebenzi kahle futhi kunzima ukuyikala.
Igebe Lokuqukethwe Lomhlaba Wonke
Abakhangisi benza inani elikhulu lokuqukethwe kokumaketha nokuthengisa ku-automation yokumaketha, ukumaketha kokuqukethwe kanye nezinhlelo zeWebhu ze-CMS abazisebenzisayo ukuletha okuhlangenwe nakho okwenzelwe wena nemikhankaso yokukhomba izethameli. Ukufinyelela izethameli zezilimi eziningi emhlabeni wonke, konke lokho okuqukethwe idinga ukwenziwa ibekwe ezimakethe zesifunda. Kodwa-ke, abahlinzeki bezinsizakalo zokuhumusha abazisebenzisi lezo zinhlelo, okuholela kwinqubo yokungasebenzi kahle kwasendaweni. Ukuhlangabezana nezikhathi zokuya ezimakethe, abathengisi kufanele benze ukuhweba okuhunyushiwe: Ngenxa yesikhawulo sesikhathi kanye nesabelomali, bakwazi ukuhumusha kuphela izimpahla ezithile ezimakethe ezithile, bashiye amathuba emali engenayo etafuleni.
Ama-Cloudwords axazulula ifayela le- igebe lokuqukethwe lomhlaba jikelele.
Ama-Cloudwords ukumaketha komhlaba wonke. Njenge-Global Go-to-Market Hub, ama-Cloudwords enza ukuhamba komsebenzi kwasendaweni kwakho konke okuqukethwe ebhizinisini ukusiza izinkampani ukuqalisa imikhankaso yezilimi eziningi emhlabeni izikhathi ezingama-3-4 ngokushesha futhi okungenani kube ngu-30% wezindleko. URichard Harpham, isikhulu esiphezulu se-Cloudwords
Inkampani yobuchwepheshe bangempela eyakhiwe kusukela phansi, i-Cloudwords iyipulatifomu yokuqala esuselwa emafini, yokuhumusha eyenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zekhasimende. Ama-Cloudwords aletha ukuhlanganiswa okungenamthungo kokuzenzekelayo okungaphezulu kwama-20 okuhola phambili kwezimboni, ukuphathwa kokuqukethwe, kanye nezinhlelo zeWebhu CMS. Lokhu kufaka phakathi i-Marketo, i-Adobe, i-Oracle, i-HubSpot, i-WordPress ne-Drupal, ukusheshisa ukumaketha komhlaba wonke ngezinga, kukhulise i-ROI yemizamo yomhlaba wonke yebhizinisi, nokwandisa kakhulu ukwenziwa kwemali kanye nemali engenayo.
Izici eziyinhloko ze-Cloudwords
Izibalo zesikhathi sangempela nemibiko: Landelela ukusetshenziswa kwemali, hlaziya ukusebenza kahle kwenqubo, futhi ulinganise ikhwalithi ne-ROI ezingeni lomhlaba kanye nesifunda ngesikhathi sangempela.
Ukuphathwa Komkhankaso Womhlaba Wonke: Ngokubambisana hlela futhi usebenzise imikhankaso yomhlaba, yesifunda, neyasendaweni ngobuchule nangokushesha kuyo yonke iminyango, amayunithi ebhizinisi, nakwezindawo. Dala amaphrojekthi wokuhumusha futhi ulandele inqubekela phambili ngamadeshibhodi anamandla. Hlanganisa amaqembu ahlakazekile ngokufaka phakathi ukuxhumana nokusebenzisana, futhi uthole izexwayiso nezaziso ezizenzakalelayo.
I-Cloudwords OneReview: Ithuluzi elihamba phambili lokusebenzisana lokubuyekezwa kokuqukethwe nokuhlelwa kwemboni, amakhono ezobuchwepheshe e-OneReview enza kube yindlela elula yokubuyekeza nokuhlela okuqukethwe okuhunyushiwe.
ICloudwords OneTM: Isizindalwazi semininingwane yokuhumusha esisingethwe maphakathi nendawo sigcina amagama nemisho yenkampani esevele ihunyushwe futhi siyigcina ivuselelwa ku-database. Abahumushi bakho bayakwazi ukufinyelela ku-OneTM yenkampani yakho, bonga isikhathi nemali ezindlekweni zokuhumusha, futhi bagcina imiyalezo yomkhiqizo ingaguquguquki ezimakethe eziningi nasezilimini eziningi.
Izindaba Zempumelelo Zamakhasimende e-Cloudwords
I-Cloudwords ingumlingani ohambisanayo wenqubo yokwenziwa kwendawo okwenziwa kuyo izinkampani zeFortune 500 kanye neGlobal 2000 emhlabeni wonke, kufaka phakathi i-CA Technologies, iPalo Alto Networks, Hach, McDonald's, Siemens, Marketo, Iron Mountain, Fitbit, Patagonia, neBlackboard.
Ama-Cloudwords axazulula isidingo esibucayi sanoma iliphi ikhasimende elenza ukumaketha emhlabeni wonke. URichard Harpham, isikhulu esiphezulu se-Cloudwords
Ama-Cloudwords Afaka iMarketo ekulawuleni amawebhusayithi ayo omhlaba jikelele
Ipulatifomu yokumaketha okuzenzakalelayo iMarketo iyisibonelo esihle sekhasimende le-Cloudwords eletha amawebhusayithi asendaweni ezenzelwe izethameli zomhlaba ezindaweni eziqondiwe. Ithimba lakwaMarketo likwazile ukusheshisa izikhathi zokuguqula okuqukethwe okwenziwe kwaba okwasendaweni ngakho amasayithi alo omhlaba avuselelwa ngasikhathi sinye noma kungakapheli izinsuku zesayithi lase-US, kuqhathaniswa namasonto noma izinyanga kamuva. Funda ucwaningo oluphelele.
Amanethiwekhi wePalo Alto Afinyelela Kubabukeli Bomhlaba Ngokushesha ngama-Cloudwords
Inkampani yezokuphepha yenethiwekhi namabhizinisi iPalo Alto Networks ibingahumushi okuqukethwe okuningi njengoba kudingeka ukuze ihambisane nezidingo zabo zesifunda ngoba babenenqubo yokwenza okwasendaweni okwakudingeka abasebenzi abaningi, kubize futhi kudle isikhathi. I-Cloudwords ivumela iqembu ukuthi liphathe kalula amaphrojekthi wokwenza okwasendaweni, kanye ne-interface ezenzakalelayo phakathi kwe-Adobe Experience Manager ne-Cloudwords ijubane isikhathi sokuguqula ukuhumusha, okubenza bakwazi ukudala futhi bahambise imikhankaso eminingi yasendaweni, kaningi, ukushayela ukufunwa kanye nemali engenayo emhlabeni jikelele. Funda ukutadisha okugcwele.
Ekomkhulu lakhe eSan Francisco, i-Cloudwords ixhaswa yi-Storm Ventures kanye nababukeli be-computing yamafu abanjengoMarc Benioff, umsunguli we-salesforce.com. Imeyili Discover@cloudwords.com Noma vakashela www.cloudwords.com ukuthola eminye imininingwane, bese ujoyina ingxoxo yomhlaba wonke ku-Twitter @CloudwordsInc futhi on Facebook.
Tags: adobeIbhodi emnyamaUbuchwepheshe be-CAamagama wamafuDrupaleloquangqoAmapulatifomu okwabelana ngamafayelaFitbitglobaligebe lokuqukethwe lomhlaba jikeleleUkukhangisa Komhlabaimikhankaso yezentengiso yomhlabaHhayiindawoIron MountainkwasendaweniumabhebhanaMcDonald'sOracleAma-Palo Alto NetworksI-PatagoniaSiemensindawoukuhumushaWordPress
I-Newlytics: Indlela Entsha Yokuqonda Ukuthengisa Kwakho